Yakadzika inodzoka kurudyi kona servo worm magiya emusoro - anoderedza, honye anodzora, honye gearboxes, mapuraneti magiya mabhokisi, anomhanyisa anoderedza, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, zvekurima magiya mabhokisi, matarakita magiya, marori magiya, honye gearbox
musha / Yekumhanyisa Reducer & Gearbox / Yakadzika inodzoka kurudyi kona servo worm gearheads
Yakadzika inodzoka kurudyi kona servo worm yokuderedza
yakakwira chaiyo honye giya chinhu chakanakira chinotsiva chaiyo mapuraneti gearbox, iyo yekugadzira michina inogona kudzikisira mutengo wekushandisa chaiyo mapuraneti gearbox.
Mhinduro yakagadzika yemugadziri ndeyekutenderera madhigirii makumi mapfumbamwe kuti uise iyo servo mota dhiraivha masystem
Worm shaft mune akateedzana anogona kutungamirwa neimwe mota kuti uwane yakawiriranwa kubuda kwemazhinji honye mavhiri. Yakave ichishandiswa otomatiki kupukuta nharembozha goko uye zvimwe zvigadzirwa
Zvishoma zvekudzosera kumashure Zvimiro:
- Worm giya gyration backlash inogona kugadziridzwa kusvika isingasviki 1 arc.
- Kuderedza kunogona kugadziriswazve gap mushure mekushandisa.
- Input pamwe nekubatanidza: yakavimbika pasina backlash.
- Kuburitsa uchishandisa conical clamping mhete yekubatanidza: yakavimbika isina kudzoka shure.
Precision rotary inofamba
- Kuderedza ruzha uye kudengenyeka kunokonzerwa nekuchinja kwemutoro uye shanduko yekucheka simba.
- kudzora ruzha uye kukanganisa kunokonzerwa nekorotation uye kudzosera kumashure.
- Nekuderedza kupfirwa kwehonye.
- Kuwedzera honye kuburitsa mhinduro kumhanya.
Precision Indexing chishandiso
- CNC muchina, gungano mutsara, wekucheka muchina, hutachiona mitsara, nezvimwe.
- Indexing chishandiso, kuverenga chaiko mashandiro inoda chaiyo kufamba zviitiko
Kukurumidza kuchinja mamiriro
- Kuderedza ruzha uye kukanganisa kunokonzerwa nekukurumidza shanduko.
- Kuderedza honye abrasion iyo inokonzerwa neshanduko shanduko.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwechigadzirwa ruzivo- ndokumbira utore-Sampuli:
Yakadzika Yekushure Gearbox-PDF